août | 2021 | InfoKmada
Antananarivo : mbola maro ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra
InfoKmada - 30 août 2021 0
Maro amin’ireo tanora sy raiamandreny tsy mahay mamaky teny sy manoratra no hiaran’ny faty antoka sy ny fanambakana eny anivon’ny fiarahamonina ankehitriny. Anton’izany ny sakana mianjady amin’izy manoloana ny tsy fisihan’ny fampianarana sy ny fahalalana mikasika ny fahaizana mamaky teny sy manoratra.
Fampianarana : zava-dehibe ny fampitomboana ny traikefan’ireo mpampianatra
Mbola maro ireo mpampianatra mila fiofanana hahafahana mampitovy lenta ny fampianarana eto Madagasikara, hoy ny IFEM na ny Institut des formations des enseignants Madagascar, izay nanao fikarohana nandritry ny 03 taona. Tokony hisy ihany koa vahaolana maharitra hanatsarana ny tontolon’ny fampianarana sy fanabeazana, hoy izy ireo.
PRM : hirosoana ny fandraisan’ireo Malagasy ao Frantsa anjara amin’ny fifidianana
Hirosoana hoy ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ny fandaminana hahafahan'ireo Malagasy monina ao Frantsa, handray anjara amin'ny fifidianana ny taona 2023. Nohamafisiny ihany koa fa voninahitra lehibe ho an'i Madagasikara ny fanasana azy ho vahiny manan-kanja nandritry ny fihaonana lehibe nokarakarain'ny MEDEF.
MMM : notanterahina ny Assise Régionale teto Antsiranana
Notanterahana tao Antsiranana ny fikaonandoham-paritry ny antoko Malagasy Miara Miainga na ny MMM. Isan’ny lahadinika tamin’izany ny fitsipika anaty mifehy ny Antoko, eo ihany koa ny fametrahana ny birao vaovao hitondra ny faritra Diana. Tonga nanatrika izany ireo ben’ny tanàna sy ny mpanolontsaina.
Andilana Avaratra : mitohy ny fitrandrahana Béryl an-tsokosoko
Mitohy hatrany ny fitrandrahana vatosoa an-tsokosoko ao Andilana Avaratra amin’izao fotoana izao. Manoloana io, miantso ny fitondram-panjakana hijery akaiky ity raharaha ity sy handray fanapahan-kevitra ireo mpitrandraka.
Sidina fampodiana faharoa : nigadona teny Ivato androany
InfoKmada - 27 août 2021 0
Na teo ary ny fihemoran’ny sidina fampodiana ireo teratany malagasy, ny maraina teo no tonga teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny sidina faharoa fampodiana ireo teratany malagasy taraiky tany ivelany. Tsy maintsy manao ny fihibohana any amin’ny hotely avokoa ireo olona vao tonga, ary efa nanao ny fitiliana PCR.
Fanaovam-baksiny : toerana miisa 744 no hanatanterahana izany manerana ny Nosy
Mitohy ny fanapariahana ny vaksiny hiadiana amin’ny Covid-19 manerana ny Nosy. Hatramin’ny androany, toerana miisa 213 amin’ireo 744 no efa ahitana izany raha ny fanazavana ary hisokatra tsy ho ela amin’ny daholobe ny vaksiny Johnson & Johnson.
Distrikan’i Fandriana : tokony atao laharam-pahamehana ny lalana hoy ny Solombavambahoaka
Miantso ny fitondram-panjakana amin’ny tokony hanamboarana ny lalam-pirenena faha-41 ny Solombavambahoaka voafidy tany an-toerana. Sahirana ireo mpitondra marary mamonjy tanan-dehibe, voatery amidy mora ihany koa ny vokatr’ireo tantsaha raha ny fanazavana.
Fisokafan’ny sisintany amin’ny Oktobra : mbola tsy mari-pototra
Tsy mbola ahafahana miomana tanteraka ny fanambarana nataon’ny filohan’ny Repoblika amin’ny mety fisokafan’ny sisintany amin’ny volana Oktobra hoy ny avy eo anivon’ny Confédération du Tourisme à Madagascar. Antony, mety mbola hiova hevitra indray ny fitondram-panjakana. Ho lalim-paka ny fanarenana ny toekaren’I Madagasikara hoy kosa ny mpahay toekarena nanaovana fanadihadiana raha toa ka mbola hiverin-dalana indray ny fitondrana.
Praiminisitra Ntsay Christian : “ tokony avela hiasa ireo minisitra vaovao “
Taratry ny demokrasia sy ny fanarahan’ny vahoaka ny raharaham-pirenena ny fanehoan-kevitra maro samihafa amin’ny tambazotran-tserasera momba ireo minisitra vaovao mandrafitra ny Governemanta hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian. Ny tenany izay nanao ny vaksiny johnson&Johnson teny amin’ny CHU Befelatanana androany.